निर्णय नै उपलब्धि होइन - Samay Dainik
निर्णय नै उपलब्धि होइन
July 1, 2019 Samay Dainik
देशभरिमा लोकसभा अनि विधानसभा चुनाउ समाप्त भएको एक महिना अधिक भइसकेको छ। सिक्किममा पनि क्षेत्रीय पार्टी सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकार गठन भएको एक महिना पुरा भयो। यसपटक पनि सिक्किममा चुनाउ प्रक्रिया शान्तिमय ढङ्गमा समाप्त भए पनि चुनाउपछि यहाँको शान्ति श्रृङखला भङ्ग हुँदै गएको देखिन्छ। वास्तवमा त सरकार गठन भएपछि आम-जनतालाई शान्ति अनि सुरक्षा दिनुपर्ने हो, तर यस्तो नभएको अनि आजसम्म राज्यमा आतङ्कपूर्ण स्थिति कायम रहेको विभिन्न स्रोतहरूबाट थाहा लागेको छ। सिक्किमको शान्ति श्रृङ्खलाको सुरक्षा गरेर राख्ने काममा एसकेएम सरकार विफल बन्दै गइरहेको छ।
प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा जनताले प्रतिनिधि चयन गर्छन् अनि चुनिएका प्रतिनिधिहरूले राज्य तथा देशको विकाससितै शान्ति-सुरक्षालाई सुनिश्‍चित गर्न सक्नुपर्छ। प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा जनताले स्वतन्त्र रुपमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्न सक्छन्। यो जनतालाई संविधानले दिएको मौलिक अधिकार हो। तर, अहिले सिक्किममा सत्तामा पुगेको एसकेएम पार्टीका समर्थकहरूले गाउँ-बस्तीमा एसडीएफ समर्थकहरूलाई धम्क्याउने, अपशब्दहरूले प्रहार गर्ने अनि उनीहरूको सम्पत्तिहरूलाई क्षति पुर्याउने जस्ता क्रियाकलाप अघि बढाइरहेको कुरा निरन्तर अघि आइरहेका छन्। यति मात्र नभएर एसकेएम पार्टीबाट मनोनित भएर संवैधानिक पदमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले खुल्ला मञ्चबाट सिक्किममा 25 वर्षसम्म विकाससितै नागरिकलाई शान्ति अनि सुरक्षा सुनिश्‍चित गर्ने नेता पवन चामलिङलाई दुई महिनामा शेष’ गर्छौं भन्नेजस्तो धम्कीपूर्ण वक्तव्यले सिक्किमको शान्ति अनि सुरक्षा खतरामा पर्दै गएको स्पष्ट भएको छ।
चुनाउपूर्व ट्रान्सफर तथा भिक्टीमाइजेशन गर्दैनौं भन्ने एसकेएम पार्टीले सत्तामा पुगेपछि ट्रान्सफर मिन्स ट्रान्सफर भन्दै सर्कुलर जारी गरेर 300 अधिक कर्मचारीहरूलाई ट्रान्सफर गर्यो। सर्भिस एक्सटेन्सन गर्दैनौं भन्यो तर आफ्नो वचन तोड्यो। अहिले सिक्किममा यस्तै भइरहेको छ। सिक्किमे जनता शान्तिप्रेमी छन् भनेर एसकेएम पार्टीले चुनाउअघि बारम्बर भन्ने गर्दथ्यो। हो, सिक्किमे जनता शान्तिप्रेमी छन्। तर, अहिले राजनीतिक प्रतिशोधको भावना लिएर किन सिक्किमे शान्तिप्रेमी जनताको शान्ति खोसिन्दैछ, ठूलो प्रश्‍नचिन्ह खडा भएको छ। के एसकेएम पार्टीले भनेको अनि सिक्किमे जनताले चाहेको परिवर्तन यस्तै हो?
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने एसकेएम पार्टीले विधानसभा चुनाउअघि समय सीमासितै आफ्नो धेरैवटा प्रतिबद्धताहरू जनतासामु ल्याएको थियो। यस्ता आश्वासन अनि प्रतिबद्धतामाथि पनि जनताले छानबीन गर्ने अनि त्यसको जवाफ माग्ने दिन आएको छ। जनताले विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न राखेको एसडीएफ पार्टीले एसकेएम पार्टीले सरकार गठन गरेको एक महिनाभित्र पूरा गर्ने वचनहरू पूरा गर्यो या गरेको छैन भन्ने कुरा जनतालाई देखाउने पहल गरिरहेको छ। विधानपालिकाको कार्यवाहीमा जनताको निम्ति सत्ता होस् या विपक्ष उत्तिकै महत्त्व राख्छन्। दुवैले जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जनताको आवाज बनेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैले एसकेएम पार्टीले एक महिनाभित्र पूरा गर्ने राज्यहितका कामहरू कुन स्थितिमा रहेका छन्, यसमाथि चिन्तन गर्ने समय हो।
चुनाउअघि एसकेएम पार्टीले सरकार गठन गरेपछि एक महिनाभित्र यो गर्छौं र त्यो गर्छौं भन्दै धेरै घोषणाहरू गरेको थियो तर घोषणा गरिएका एउटै काम पनि पुरा गरेन। सरकार गठन गरेको एक महिना पुगेको अवसरमा एसकेएम पार्टीले आफ्नो उपलब्धिहरू भन्दै सामान्य कामहरूको सूची जारी गर्यो। तीमध्ये अधिकांश कामहरूको प्रक्रिया एसडीएफ सरकारकै कार्यकालमा अघि बढेर निष्कर्षमा पुग्नलागेको थियो। एक महिनामा नै एसकेएम सरकारको अपरिपक्वता र कमजोरीहरू एकएक अघि आइरहेको छ। चुनाउअघि एसकेएम पार्टीले एक महिनामा गर्छौं भनेको कामहरूमध्ये एउटै पनि काम गर्न सकेन। आफ्नो घोषणाअनुसार काम गर्न असफल भएपछि एसकेएम पार्टीले जनताको ध्यान अर्कैतिर केन्द्रित गर्न सामान्य कामहरूलाई उपलब्धि भन्दै सार्वजनिक गरेको छ। कुनै फलको विरूवा रोप्नु नै उपलब्धि हो कि त्यो फलको बोटमा फल फल्नुचाहिँ उपलब्धि हो? यो विषयमा एसकेएम सरकार अस्पष्ट देखिएको छ। एसकेएम पार्टीलाई आफ्नै घोषणाहरूको भारीले थिचेर थला पार्न थालिसकेको छ।
जिल्लापालद्वारा इण्डेन बोटलिङ प्लान्टको निरीक्षण
लिङ्गसेख सरस्वती शिशु निकेतनको एसएमसीको सभा सम्पन्न
Total views : 1082166